Adobe Photoshop 7.0 with serial Full [153.5 MB] ~ ဘလော့ခရီးသည်
Adobe Photoshop 7.0 with serial Full [153.5 MB]
Photoshop ချစ်သူများအတွက် တောင်းဆိုထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်တွေ အတွက်ရော..
အလှု . မင်္ဂလာဆောင် . မွေးနေ့ ဖိတ်စာ ဒီဇိုင်း ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲတတ်တဲ့
ဝါသနာတွေ အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ Adobe Photoshop 7.0
လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Photoshop ဝါသနာ သူငယ်တွေနှင့်
လိုအပ်သူများ အောက်မှာ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...
Windows XP / Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32-bit or 64-bit)
အားလုံးမှာ Install ပြုလုပ်ပြီး လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Download From Here လင်းစွယ်စုံ(နည်းပညာမျှဝေခြင်း)
Posted in: Photoshop Software